Coincheck umemezela ukubuyiselwa kwemali luqale ngesonto elizayo - Blockchain Izindaba
Japanese cryptocurrency exchange Coincheck wamemezela ukuthi uhlela ukuvumela abasebenzisi ukuhoxisa yendawo kusuka kuma-akhawunti abo ngoLwesibili olandelayo.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi Hack ngomhla ka-Jan. 26, okudale isevisi ukuvala shaqa ngokuzumayo. Coincheck iqamba sabezindaba lapho ke uyavuma ukuthi 500 CHA kwezigidi ezingu amathokheni (kuwufanele emhlabeni $533 abayizigidi ezingu ngesikhathi) wayethunjiwe kusukela wallets yayo digital nesigebengu.
Ngo isaziso uthumele namuhla, kusho inkampani (nge translation olungekho emthethweni):
“okwamanje, amafa amakhasimende’ yen Japanese ziphethwe ngokuphepha inhlangano yezimali. Sizoqalisa ukuhoxa eliqala ngo-February 13, 2018.”
Amakhasimende baye izimali kwadingeka wanamathela exchange njengoba iqinisekise ukuthi wahlupheka Cishe sasinjani Hack enkulu emlandweni cryptocurrency.
insitha zezimali Japan, Financial Services Agency (FSA), wathi ngesikhathi, “ukuphathwa okungalungile wesistimu izingozi kwase kuyinsakavukela at Coincheck.”
Naphezu zithembiso ...
Thumela Previous:Kwenzekani Binance Exchange futhi lapho amabhidi aqala
Juni 11, 2018 ngesikhathi 10:39 AM
Agasti 29, 2018 ngesikhathi 8:36 AM